Ny Renivohitra Kyrgyzstan sy ny Trolleybus-ny Be Mpankafy Mitriatra Fitaratra Arotsioka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Marsa 2017 14:41 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Nederlands, Français, Español, English
Tsy manana lohahevitra Salvador Dali ny ankamaroan'ireo fiarabe fitaterana Trolley Kyrgyz. Nolokoin'ny vondrona zavakanto DOXA ao Bishkek ity iray ity. Sary nalaina tao amin'ny Kloop.kg. Creative commons.
Anisan'ny manome endrika ny tanàna manan-danja sy mahasarika ao an-toerana ny fiarabe fitaterana trolleybus hatramin'ny nahatongavany tao Bishkek renivohitr'i Kyrgyzstan Sovietika taloha nandritra ny taona maizimaizin'ny Stalinisma. Raha nanome ny toerana ho an'ny marshrutka (minibus) be mpampiasa kanefa tsy dia maro mpakafy izy ireo nandritra ny taona maro dia mbola nitana hatrany ny maha fitateram-bahoaka be mpitia izay manome ny mponina dia miadana, mora sy milamina kokoa izay mampitohy ny faritra lehibe maro ao amin'ny tanàndehibe manana mponina an-tapitrisany izy.
Eny, ary mampihena ny etona karbaonina ihany koa izy ireo.
Nandritra ny roa taona farany na mihoatra, nanolotra an'ny Twitter pikantsarin'ny fiainana ambadiky ny kodiaran'ireo fiarabe fitaterana trolleybus ao Bishkek ilay mpikaroka Amerikana Ryan Johnson . Manasongadina ny endrika anatiny samihafa araka ny hitiavan'ny mpamilin'ny fiarabe trolley azy avy miaraka amin'ny lamba haingony isan-karazany ny tenirohy#stylishtrolleys , sady manolotra ny topimason'ny fifamoivoizana ao Bishkek amin'ny alalan'ny fiara vaky fitaratra arotsioka.
Azon'i Johnson sary niaraka tamin'ny fahavalom-bahoaka voalohany marshrutka ity fiarabe fitaterana trolley eto ambany ity, izay voaravaka lamba manana haingo mampiavaka ny mpifindrafindra monina Kyrgyz .
Iray amin'ireo vazantany komonista vitsy taloha teto amin'izao tontolo izao i Kyrgyzstan izay ahitana ireo fiara minibus tsy ‘hipetrahana fotsiny ihany’, ary ny vokatry ny fibosesiky ny olona mitsangana ao anaty Mercedes Sprinter marshrutki hita eny rehetra eny no loharanon'ny lolom-po iombonana. Azo atao ny mitsangana ao anaty fiarabe fitaterana trolley, kanefa malalaka tsara ny toerana hanaovana izany.
Ity maodelinà lamba mihantona manan-karena voninkazo manga izay manaingo ity fiarabe trolley manaraka ity dia mampatsiahy kokoa ny mpifanolobodirindrina amin'ny Kyrgyzstan dia i Uzbekistan ary mampanembona ny Lalamben'ny Lasoà malaza ao an-tanàndehiben'i Samarkand, Bukhara sy Khiva.
Miandry ny andro mazava kokoa ny solomaso aro masoandro.
Feno raozy sy lolo ity fiarabe fitaterana trolley ity..
Indrisy anefa fa tsy mbola fady ao Bishkek ny mitondra fiara sady miresaka amin'ny finday, tanàndehibe izay misy lalana zary mahazatra ny loza mahafaty.
Misy amin'ireo mpamilin'ny fiarabe fitaterana trolley no matoky ny fitsikian'ny vintana sy amin'ny soratra masina Islamo mba hanampy azy ireo hamakivaky ny làlambe mampidi-doza ao an-tanàndehib , fa mino ny fomba fiteny Rosiana hoe “деньги к деньгам”, na ‘misintona vola ny vola’ kosa ny hafa .
Mampiseho am-pireharehana ny vola taratasy avy ao Kyrgyzstan, sy avy ao Uzbekistan ihany koa ary ny iray hafa avy any Turkmenistan ny fiarabe fitaterana trolley-ntsika manaraka. Mitondra ny sarin'ny mpanao didy jadona mpanankarena etona tao amin'ny firenena teo aloha Saparmurat Niyazov ity vola taratasy dika Turkmen manat ity (ny kely avy any ambany, ambony indrindra miankavanana), izay tsy ampiasaina intsony ankehitriny .
Ratsy ny làlana ao Bishkek amin'ny ankapobeny ka manome fahasorenana ho an'ny mpamily rehetra .
Saika hita matetika ny fitaratra vaky arotsioka noho ny lalan-dratsy. Ity ambany ity ny ohatra iray amin'ny fitaratra arotsiokan'ny fiarabe fitaterana trolley izay vao manomboka simba ….
. raha efa eo am-pahasimbana tanteraka kosa ity fitaratra arotsioka ity.
Amin'ny 8 som (12 cents Amerikana), mora saran-dalana kokoa ny fiarabe fitaterana trolley noho ny 10 som ho an'ny marshrutka, ary mora im-polo avo heny noho ny fiarakaretsaka manerana tanàndehibe.
Ankoatra izany, misy rivodrivotra tsara kokoa izay ilaina rehefa mihamafana ny toetr'andro amin'ny ankapobeny izy.
Indraindray, mitondra ny namany na ny vadiny ny mpamily rehefa mandeha . Miaraka amin'ny vazy misy voninkazo tsy tena izy izany, ary mahatonga anao hahatsapa fa toy ny lalitra ao an'efitra fandraisam-bahin'olona iray ianao fa tsy toy ny mpanjifa mitaingina fitateram-bahoaka.